Somaliland: Masuulkii Gacantiisa Ku Qoray Heshiiskii Jamaal Cali Xuseen Musharraxa Ku Noqday Oo Difacaay Sharcinimada Musharraxnimada Jamaal Eedo Kululna U Soo Jeediyey Guddoomiye Faysal - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Masuulkii Gacantiisa Ku Qoray Heshiiskii Jamaal Cali Xuseen Musharraxa Ku Noqday...
Waxa Uu Faysal Cali Waraabe Ku Tilmaamay Nin Haadaan Ka Ridaya Xisbiga Ucid
Aqoonyahan Maxamed Haaruun Biixi oo hore uga mid ahaan jiray Masuuliyiinta sarsare ee xisbiga Caddaaladda iyo Daryeelka ee UCID ahaana masuulkii isagu gacantiisa ku qoray heshiiskii ay ku midoobeen Siyaasiyiintii Jamaal Cali Xuseen hogaaminayay iyo xisbiga UCID ee Jamaal loogu doortay Musharraxnimada Madaxweyne ee xisbiga UCID kaasi oo sheegay in Jamaal xaq u leeyahay musharraxnimada xisbiga kuna yimid heshiis sharci ahaa oo xisbigu gaadhay, Guddoomiye Faysalna aanu wakhtigan xaq u lahayn in uu diido arrinkaasi.
Aqoonyahan Maxamed Haaruun Biixi oo ka mid ah Aqoonyahanada Qurbe joogta ah ee reer Somaliland balse wakhtigan ku sugan dalka ayaa qoraal uu kaga dareen celinayo hadaladii ay is waydaarsadeen Jamaal iyo Faysal waxa uu ku sheegay in gari Allay taqaanaaye uu Jamaal garta leeyahay. Aqoonyahan Maxamed Haaruun Biixi oo qoraal kooban ku baahiyey degelka uu ku leeyahay mareegta xidhiidhka bulshada ee Facebook waxa uu ku yidhi sidan:
“Xisbigii UCID qaylo kale ayaa ka soo yeedhay. Qayladiisu mudoba waa ay baxaysay, ee hadda ayaa ay saani banaanka u timid.
Wax la yidhi niman mayd sida, ayaa si xaal ka noqdayba, uu maydkii gacmahooda ka muruxsaday oo ka dhacay. Nin raggii ka mid ah ayaa yidhi – hadda ayaa uu sii go’ay! Ayaan daradda xisbigan dhexdiisa ka jirta, ee bixi wayday, cid keliya ayaa eedeeda oo aan qaybsanayn iska leh, waana Faysal Cali Xuseen. Baabuur ayaa uu Faysal ku wadaa biriij aad u dheer dushiisa, hadba midig iyo bidix ayaa na uuu si xooggan isteerinka ugu qabanayaa. Dhibtu waxa ay tahay, haadaanta hareeerihiisa ee biriijka ka hoosaysa ma arko, ama ma doonaayo in uu arko. Ma dareensana waxa uu samaynaayo in isaga iyo gaadiidka uu saaranyahay (UCID) ba ay ku bixi karaan, oo aan dib loogu yeedh-yeedhi doonin. Faysal si jees-jees ah, oo cidnaba aanu kala tashanin, ayaa uu suuqa (Hotel Maansoor) uga leeyahay Jamaal ma aha musharax! Wa hadal af ka wayn. Anigu gacantayda ayaa aan ku qoray heshiiskii qoraalka ahaa ee uu Jamaal xisbiga ku soo galay, isla markaana musharaxxa ku noqday. Faysal qoraalkaas waa uu saxeexay, golaha dhexe ee xisbiga, oo Faysal uu koow ka yahay na waa ansixiyay, tobanaan xafladood na waa uu kaga khudbeeyay in Jamaal la doorto. Hadda waxa uu Faysal leeyahay wixii oo dhan halna ma ka jiro, hadda iyo markii horeba aniga ayaa sax ah. Xubnaha xisbigu na waxa ay leeyihiin – waa hadii aan ka yeelno! Weli tan oo kale? Gari tol ma taqaanno, oo Faysal ma taqaanno, oo xisbi ma taqaano. Gari Ilaahay baa ay taqaanaa!
– Wadartii tolkay, iyo intii waaxid iga beeray.
– Wiil iyo walaaloba hadii, aanu isku waayayno.
– Walee midhka ila gudboon, baan cidi I waydaarin”
kjilaafka xisbiga Ucid